Ivandry : Tovovavy mpianatra, maty notsatohan’ny mpanendaka antsy
(06-12-2017) - Tovovavy iray, mianatra eny amin’ny Anjerimanontolo no namoy ny ainy omaly maraina, taorian’ny ratra nahazo azy, vokatry ny tsatok’antsy teo amin’ny kibony. Ny zoma hariva teo tokoa mantsy, no niharan’ny fanendahana ity tovovavy ity, teny amin’iny faritra Ivandry iny.
Samy nahatadidy ny rehetra fa avy be izay tsy izy ny orana tamin’io harivan’ny zoma io teto Andrenivohitra sy ny manodidina. Ary ao anatin’ny fotoana tahaka ireny mihitsy no manjaka ireo tontakely manao ny asa ratsiny. Tamin’io fotoana io dia avy nianatra ity tovovavy ity, ary niala ny fiara nitondra azy teo amin’ny fiantsonana teo Alarobia, hamonjy ny fodiany. Nandeha irery tao anatin’ilay ora-mikija. Raha ny angom-baovao azo dia lehilahy iray, izay nitondra aro orana no nanaraka azy avy ato aoriana. Rehefa tojo tamin’ny toerana mangingina dia nohararaotiny noendahana.
Sendra ny tsy nampoiziny anefa ilay mpanao ratsy fa tsy nanaiky mora izay asa ratsy natao taminy izany ity tovovavy mahery fo ity fa niezaka ny nanohitra azy hatramin’ny farany. Rehefa hitan’ilay mpanendaka fa tsy ahazo n’inona teny aminy izy dia avy hatrany dia nolerany ny antsy teo amin’ny kibony, ary lasa nitsoaka nony avy eo. Tonga tany an-tranony ihany ity farany na dia teo aza ny ratrany, raha ny vaovao azo. Ary nentina novonjena haingana tany amin’iny hôpitaly. Lalina ihany anefa ny ratra nahazo azy, ary fantatra fa nisy taova saropady voakitika tamin’izany. Ka na dia teo aza ny vonjy aina nataon’ireo mpitsabo dia tsy tana intsony ny ainy io omaly maraina io. Fantatra fa efa nametraka fitairanana teny anivon’ny mpitandro filaminana ny fianakavian’ity tovovavy voaendaka sy namoy ny ainy ity.